Kulan ammaanka looga hadlayay oo xalay ka dhacay Xarunta Nabadsugida | Sagal Radio Services
Kulankan ayaa waxaa ka qeyb galay, sii hayaha Wasiirka Arrimaha Gudaha, Sii hayaha Wasiirka Gaashaandhiga, saraakiil ka tirsan AMISOM iyo saraakiisha ammaanka ee dowladda, waxaana la iska xog-wareysanayay xaaladaha amniga dalka.
Mas’uuliyiintii shirka ka qeyb gashay ayaa waxay ku amaaneen Ciidamada Nabadsugida howl galada lagu sugayo amniga oo ay ka wadaan magaalada Muqdisho iyo deegaanada ku dhow dhow.
Afhayeenka Wasaarada Amniga Maxamed Yuusuf ayaa warbaahinta u sheegay in kulanka loogu hambalyeeyay ciidamada nabadsugida iyo sirdoonka qaranka oo howl gallo lagu qab qabto xubno muhiim ah ka tirsan Al-Shabaab ka sameeyay Muqdisho, isla markaana bur buriyay shabakado weeraro ka fulin jiray Caasimada Muqdisho sida uu yiri.
Taliyaha Nabadsugida oo kulanka ka hadlay ayaa sheegay inay dar dar gelinayaan howl galada lagu bartilmaameedsanayo Al-Shabaab inta ammaanka shacabka laga xaqiijinayo, isla markaana ay ciidamada habeen iyo maalin howl galadaas sii wadayaan.
Kulankii xalay ka dhacay xarunta Nabadsugida qaranka ayaa ka mid ah kulamo ammaanka looga hadlayo oo hey’adaha ammaanka ay ku yeelanayeen mudooyinkii u dambeeyay magaalada Muqdisho.
Tags amaanka dhacay ka kulan muqdisho oo